6 Jimicsiyada Awoodo Adag Oo Loogu Talagalay Sore Knee | Vondt.net
17 / 03 / 2016 /0 Comments/i jilibka, tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga, Jimicsiyada xoog, tababarka/av waxyeelladayda
Miyaad la xanuunsaneysaa xanuunka jilibka oo aad ka baqaysaa jimicsi? Halkan waxaa ah 6 wanaagsan, jimicsi xoog loo diyaarshay xasillooni badan, xanuun yar iyo shaqo jilicsan oo fiican.
Xanuunka jilibka wuxuu yeelan karaa sababo kala duwan, sida arthrosis, jahwareer, murqo xumo iyo wixii la mid ah. Xanuunka jilibka ee jilibka ayaa ah inuu naga cabsi qabo inaan sameyno wixii aan runtii sameyn lahayn, taas oo ah, jimicsi. Isticmaal la’aan iyo jimicsi la’aan ayaa horseedda deggenaansho yar iyo shaqo xumo - taas oo iyaduna keenta xanuun badan. Xusuusin: Si aad u sameyso mid ka mid ah jimicsiyadan, waxaad u baahan doontaa taraam tababar gaar ah. Kuwa jilbaha xun, waxaan kugula talineynaa jilicsanaan jaalle ama cagaar ah.
Sidoo kale aqri: 6 Calaamadaha Hore ee Osteoarthritis
VIDEO: Jimicsiyada ka dhanka ah xanuunka jilibka
Halkan guji si aad u daawato fiidiyow barnaamij ah tababarka tababbarka jilibka.
Sidookale, rukumayso kanaalkeena YouTube talo bixin jimicsi bilaash ah, barnaamijyo jimicsi iyo aqoon caafimaad.
Maqaalkan, waxaan diiradda saarnay - jimicsi xoog leh, laakiin waxtar leh - oo loogu talagalay jilbaha horeyba u xanuun yaraa. Si kale haddii loo dhigo, layliyada waxaa loo waafajiyaa xitaa kuwa caafimaadka jilibkoodu xaddidan yahay. Laakiin maskaxda ku hay in haddii aad horay u soo heshay ogaanshaha jilibka, ay fiicantahay inaad la tashto takhtarkaaga kahor intaadan isku dayin layligaan. riixo Support sidoo kale waxay noqon kartaa mid khuseysa haddii aad la halgameyso xanuun jilibka ah oo muddo dheer ah - taageerada cadaadiska waxay u horseedi kartaa wareegga dhiigga oo badan oo jilibka ah sidaas awgeedna waxaad siisaa unugyo jilicsan oo caafimaad leh iyo qaababka jilibka
1. Ka-tagidda dhinaca oo leh xarig xarig ah
Layligani waa tababar aad u wanaagsan muruqyada kursi, kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara xasilinta sinta, oo sidaas awgeed, xasilloonida jilibka. Raadi koox tababbaran (oo sida caadiga ah loogu habeeyo jimicsiga noocan ah) oo lagu xidhi karo labada geesood sidii goobaabin ballaaran.
Fiidiyow: Natiijooyinka dhinaca w / laastikada
Waxaa si dhakhso leh loo sameeyaa in la iloobo sida muruqyada kursiku ay muhiim ugu yihiin xasilloonida sinta iyo jilibka labadaba. Muruqyada gluteal adag waxay yareeyaan cadaadiska iyo culeyska jilbaha.
Buundada waxaa lagu sameeyaa iyadoo dhabarka loo jiifo iyadoo lugaha laaban yihiin cagahaaguna ay dhulka ku fidsan yihiin, gacmahaagana ay ku tiirsanayaan dhinaca. Dhabarkaagu waa inuu ahaadaa qalooc dhexdhexaad ah. Xor ayaad u tahay inaad diiriso kursiga adoo sameeya layliyo fudud - halkaasoo aad si fudud ugu adkeysid muruqyada badhida, xaji qiyaastii 5 ilbidhiqsi oo aad dib u sii wadatid. Kani waa jimicsi firfircoon oo u sheegaya murqaha inaad qorsheyneyso inaad dhaqso u isticmaasho - taas oo iyana u horseedi karta adeegsi habboon oo dheeri ah inta lagu jiro jimicsiga, iyo sidoo kale yareynta fursadda dhaawaca murqaha.
Markaad diyaar tahay, jimicsiga samee adoo isku keenaya muruqyada kursiga, ka hor inta aadan miskaha kor u qaadin oo aad sinta saqafka sare u qaad. Hubso inaad jimicsiga sameyso adigoo riixaya ciribta. Kor u qaadista miskaha dhabarka waxay ku jirtaa meel dhexdhexaad ah, oo aan badsanayn, ka dibna si tartiib ah gadaal ugu riix booska bilowga.
Layligu waa la qabanayaa 8-15 ku celcelin, ka badan 2-3 gogol.
3. Jimicsi hal lug ah oo lagu keydiyo qalabka
Haddii jimicsiyada sida kor u qaadida dhulka culeys badani u saaran yihiin jilbahaaga, markaa jimicsigan wuxuu noqon karaa bedel wanaagsan. Layligan waxaad ku tababaran kartaa jilib shaqsiyadeed taasoo faa'iido u yeelan karta haddii ay jiraan isku dheelitir la'aanta muruqyada iyo wixii la mid ah.
Soo jiido derin jimicsi oo dhig mashiinka gawaarida hortiisa (mashiinka jimicsiga weyn ee kaladuwan). Kadib ku dheji canqowga canqowga salka jaalaha ugu hooseeya kuna xir agagaaraha canqowgaaga. Kadib dooro iska caabin culeyskeedu hooseeyo. U leexo si aad u jiifsatid calooshaada, ka dibna cidhibtaada kor ugu qaad xagga kursiga - waa inaad dareentaa inay wax yar ka jiideyso gadaasha bowdada iyo kursiga. Layligu waa in lagu sameeyaa si deggan, dhaqdhaqaaq la xakameeyey (ma jiro wax xarago leh iyo nips). Ku celi 10-15 ku celcelin ka badan 2-3 gogol.
4. Jimicsiga Oyster
Fiidiyow - Jimicsi Oyster w / laastikada:
5. Darbiga seddaxlaha leh kubad
Semi-squats with ball waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu tababaro afargeesyadaada iyo muruqyada kale ee la xiriira. Semi waxaan ula jeednaa fadhiidnimo aan dhameystirneyn - nooc kala duwan oo la waafajiyay. Si aad jimicsi u sameyso waxaad u baahan tahay kubad qiyaastii kala bar cabbirka kubbadda cagta ah - waxaa muhiim ah in kubbadda ay jilicsan tahay oo ay bixin karto markii aad riixdo, laakiin isla markaa ay adag tahay in laga hortago murqaha bowdada cun.
Kubada dhex dhig lugahaaga dhexdooda, waxyar uun jilbahaaga. Dhabarkaaga istaag darbiga oo hoos u foorara illaa lugahaagu ay ku dhowaadaan xagal 90 darajo - ka yar haddii aad dareento in tani ay ku sii kordheyso jilbahaaga. Inta aad derbiga hoos udhigeyso, bowdyahaaga isku xir kubbadda si aad ugudhaqaajiso gudaha bowdyahaaga iyo quadriceps. Kadib ku noqo booska bilowga. Ku celi jimicsiga gudaha 8-12 ku celcelin, ka badan 2-3 gogol.
6. "Daanyeerku wuu socdaa" oo leh dabacsanaan
"Socodka bahalku" waa jimicsi aad u fiican jilbaha, miskaha iyo miskaha. Wuxuu isku daraa wixii aan barannay, oo aan adeegsannay, 5tii layli ee hore hab wanaagsan. Kaddib wakhti yar oo layligaan ah, waxaad dareemi doontaa inuu si qoto dheer u gubanayo kursiga.
PAGE xiga: - 5ta Heer ee Jilibka Osteoarthritis (Sidee Cudurka Osteoarthritis uga sii daraa)
Guji sawirka kore si aad ugu dhaqaaqdid bogga ku xiga.
Tags: jilbaha, jimicsiga jilibka, layliyo, xoog
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/6-styrkeøvelser-for-vonde-knær-1.jpg?media=1648573622 400 820 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-03-17 17:26:142020-05-03 14:10:566 jimicsi xoog wax ku ool ah oo loogu talagalay jilbaha xanuunka
Sonkorowga Mellitus - Nooca 1 (Sonkorowga) 10 Talo-siin dabiici ah ee Difaaca Xoog-yaraanta